I-Semalt Expert: Indlela yokuLahla iTrojan Botnet
I-botnet yeTrojan iyasasazeka xa iimpawu zakho zokhuseleko zingabonakali kwaye zithembekile. Abasebenzisi abanokwazi ukufumana i-attachments ezivela kubathumeli abangaziwa, abazenza ngathi bangabamsulwa kwaye bafuna ukuba uthathe inxaxheba kwimisebenzi ethile ye-Intanethi. Ngenxa yoko, bacela ukuba ucofe kwiikhonkco ezithile, ezingakhuselekanga - umzuege stark. Izifo ezitshatyalaliswa yiTrojan zihlala zisasazeka ngala maqhotyoshelweyo okanye iinkcukacha. Ziqukethe i-bot agents ezifakwe kwi-system yakho kwaye zenze zibe ngathi zi-zombies. UJack Miller, u-8 (Semalt uMphathi weNtengo yabaPhicothi, uthe amaninzi amatyala e-botnet iTrojan ayaxelwa xa iinkqubo zichaphazelekayo nge-rootkit ethile okanye kwi-horse yeTrojan okanye xa ikhowudi enobungozi ingena kwiinkqubo zekhompyutha kwaye inxalenye yememori yayo.
Ezi ntsholongwane zisasazeka njani?
Nje ngezinye iiprogram, i-botnets zeTrojan zisasazeka ngokukhawuleza kwaye zidibanisa inani elikhulu leekhompyutha. Ezi nkqubo ziba yinxenye yecomputer yakho kwaye akukuvumeli ukuba ziqhuba imisebenzi engekho mthethweni. Kwiindawo ezininzi, i-botnets zeTrojan kunye nezifo zidala ukungena kokucwangciswa kwisixhobo sakho kunye nokunciphisa ukusebenza kwayo jikelele kunye nokusebenza.
njani ukususa iibhetti zeTrojan kwi-system yakho?
Ngelishwa, akukho ndlela yokuthintela ukufika kwee-botnets zeTrojan kunye nezinye i-bots, kodwa unokususa kwikhompyutheni yakho ngeendlela ezintlanu ezahlukeneyo.
Inkqubo №1: Sebenzisa ii-Autoruns
Ngenhlanhla, ezinye iiprogram kunye nezixhobo kukuvumela ukuba unqande i-botnets iTrojan kwizinga eliphezulu.Siyancoma ukuba usebenzise i-Sysinternals okanye i-Autoruns.Izi zombini zinenkqubo ezilungileyo kwaye zilula ukufaka. ukuba zifakwe, akufanele uzibale ukuzenza zisebenze ngokukhawuleza kunokwenzeka.Le nkqubo iya kubhala zonke iibhentshi zeTrojan kunye nebhodi zendabuko, kukunceda ukuba ususe kwinkqubo yakho.
Inkqubo №2: Cima i-cache
Emva kokufakela le program, ungalibali ukucima i-cache yakho. Makhe ndixelele apha ukuba ininzi ye-botnets yeTrojan ishiya iinqununu zazo emva kokuba uwasuse. Ukucima i-cache kuya kuqinisekisa ukuba zonke iziqwenga zazo ziyakususwa, kwaye akudingeki ukuba usebenzele ezinye iindlela zokukhusela.
Inkqubo №3: Faka i-antivirus okanye iprogram ye-Trojan kwaye uyihlaziye
Akufanele ulibale ukufaka iinkqubo ze-anti-virus kunye ne-anti-trojan kwaye zigcine zihlaziywa imihla ngemihla. Ezi nkqubo ziyakunceda ukuba ususe zonke iintlobo ze-botnets zeTrojan, kunye nokuhlaselwa kwe-DoS nako kunqandwa kakhulu. Qinisekisa ukuba ugcine ukukhutshelwa kweempawu zakho zokukhusela kwaye ungavezi ukuzithenga ukuthenga iinguqu zabo ezihlawulwe iimpawu ezingaphezulu kunye neempawu.
Kunconywe iinkqubo ze-anti-virus kunye nezixhobo ezichasayo (i-12)
Kaspersky, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, i-Antivir, kunye ne-Trend Micro yizona zinhlelo ezinokuthenjwa ezinokuthenjwa kwi-anti-virus. Iinkqubo ezinxamnye ne-malware ziquka iMalwarebytes, i-Emsisoft kunye neZemana. Unokukhuphela uze ukhuphe naluphi na olu lwale unqulo wesi arab okanye iinkqubo ezinxamnye ne-malware ukuze ulahlwe iibhetti zeTrojan kwimimiselo embalwa. Bonke babonise ulwazi malunga nendlela i-malware yeTrojan echaphazela ngayo iinkqubo zakho kwaye awufanele ulibale ukuqhuba iskrini rhoqo xa uvula ikhompyutha yakho.